Dhirivhari Bhasiketi ine tulips uye irises "Hafu yeawa nguva yechirimo isati yasvika" muMoscow - Raira maruva
Basket ine tulips uye irises "Hafu yeawa nguva yechirimo"
40 masendimita 40 masendimita
Dhirivhari ~ 4h., mahara muMoscow
Kureba 40 cm
47 wongororo nezve iro basa remuruva:
Olga Khasanova URBAN MIBADZO 19-07-2021
Ndatenda zvikuru nekukurumidza kutumira kwako. Izvo zviri nyore kwazvo kune epamutemo masangano, iyo account inoumbwa nekukasira. Ndinokurudzira ichi chitoro chepamhepo.
Bhuu rakakura uye rinokurumidza uye rinobatsira basa! Kurudzira!
Ndiri kufadzwa zvikuru nemaruva akauya kumwenga wangu uyo ​​akafadzwa nezuva rekuzvarwa kwake, maruva acho anonhuwirira zvakanaka uye akanaka kwazvo. Ndatenda.
Basa rakakwana! Chaizvoizvo sekuraira kwandakaita, nekukurumidza. Ini ndinoshandisa zvakare! Ndatenda !!
Zvese zvakanaka, zvinokurumidza uye zvemhando yepamusoro!
Yakanaka sevhisi, ine hunyanzvi uye inoshanda. yakakurudzirwa
Chipo chinoshamisa chakabuda. Maruva akanaka uye dhizaini pachayo. Kusimba uye kudanana. Ndokutenda zvikuru. Zvese zvakaunzwa panguva yakatarwa.
Yakanaka chaizvo? Uye yakaendesa zvese nekukasira. Kubva zvino zvichienda mberi ini ndichahodha kubva kwauri ...
Ndatenda kwazvo nekuda kwemusango unoshamisa, chaizvo semufananidzo !!! Ini ndainetseka kwazvo nezvekuti maruva angatarise sei mangwanani (vakaraira kuendeswa muna Nyamavhuvhu 31), munaGunyana 1, asi pasina !!! The bouquet akamira zvakakwana usiku hwose, mangwanani - kunzwa kuti vakanga achangobva chitoro ruva. Iko hakuna kunyunyuta nezve kuendesa chero. Kutenda kune wese munhu akapinda mugungano uye kuendesa bouquet !!!
Ndakahodha maruva kubva kuBelarus kwasisi vangu vaigara kuMoscow. Isu takagutsikana kwazvo, chaizvo, takatwasuka. Kekutanga nguva pandakaona maruva akamira kwenguva yakareba zvakadaro. Pamwe akamira kwemavhiki matatu. Yakanyanya kutsva uye yakanakisa. Tora uye hauzombozvidemba.
26550 ₽ Корзина с цветами "Кремовый шелк"
Tswanda yeakajeka epinki Aqua roses (25 pcs) ine yekushongedza greenery.
5050 ₽ Tswanda yemaruva Aqua
Bouquet yepepuru yakapfava uye inopisa yepinki yemaruva maruva gumi nemaviri pcs, green cymbidium orchid 11 pcs, eucalyptus, ruscus, amburera 5 pcs, uye zvakare mune dhizaini yekugadzira mapepa.
6000 ₽ Maruva emaruva Brise d'amour
Orchid Vanda 1 bazi 3 pcs, eucalyptus 1/2 pack, vase 1 pc, oasis 1 pc, aspidistra 3 pcs.
8250 ₽ Maruva akarongeka "Wanda Orchid"
Maruva ane mavara akajeka makumi mashanu neshanu mavara Kenny akasimuka neribhoni.
Basket mupinki uye lilac tones ewanda orchids 4 pcs, Aqua roses 5 pcs, pfapfaidza maruva emhando dzakaomarara 5 pcs, lisianthus 3 pcs, lilac rose yeKenya 5 pcs, green bell greens 3 pcs, pink peonies 3 pcs, salal 1 pack, donje 3 pcs.
8840 ₽ Tswanda yemaruva "Glamour"
Bouquet ye 101 yakawanda-mavara tulips mune kraft bepa.
11150 ₽ Bouquet of tulips "Multicolored tulips"
Bouquet yeyero tulips (49 pcs) mune yekugadzira firimu
5850 ₽ Bouquet of tulips "Sunny muchirimo"